ကောင်းမွန်ဝင်း: 9/1/09 - 10/1/09
ကျွန်မရဲ. ဖေဖေဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးနဲ.ပတ်သက်တဲ.အကြောင်းအရာတွေကို
သိပ်စိတ်ဝင်စား ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာဖေဖေက ထမင်းစားပြီဆိုတာနဲ. ထမင်းစားပွဲ မှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက အကြောင်းအရာတွေကို အားရပါးရပြောပြ တတ်ပါတယ်။ ကျွန်မက အဲဒီအကြောင်းအရာတွေ (ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး) ကိုစိတ်မ၀င်စားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖေဖေကပြောဖန်များတော့ တစ်ချို. အကြောင်းအရာတွေကို အနည်းအကျဉ်းတော့ မှတ်မိပါတယ်။ ရေးတေးတေး မှတ်မိနေတဲ. အကြောင်းအရာတွေကတော့ ကမ္ဘောဒီးယားက ပိုပေါ့ အစိုးရအကြောင်း၊ ဆိုင်ဂုံမြို.အကြောင်း၊ မော်စီတုန်း၊ တိန်.ရှောင်ဖိန်၊ ဂိုဗာချော့၊ ဆူဟာတို၊ အရာတိုလာခိုမေနီ၊ မာဂရက်သက်ချာ၊ အီဗရာဟင်လင်ကွန်း၊ အကွီနို၊ သီဟာနု၊ နာကာ့ဆိုနဲ ယာဆုဟိရိုဲ၊ တနာကာ့ ခါ့ကုအဲ၊ အိုဘုချိ ခဲအိဇိုး၊ တီအန်နန်မန်ရင်ပြင် အကြောင်းတွေပေါ.။ဖေဖေ ပြောခဲ့တာတွေကတော့ နောက်ထပ်အများကြီး ကျန်ပါသေးတယ်။ကျွန်မကတော့ သိပ်မမှတ်မိ တော့ပါဘူး။ မှတ်လည်းမထားမိခဲ့တာပါပါတယ်။ ဖေဖေက မနက်တိုင်းညတိုင်း ဘီဘီစီနဲ. ဗွီအိုအေကို မပျက်မကွက်နားထောင်တယ်။ (ဟိုအရင်ခေတ်က) သတင်းစာကို (လုပ်သား၊ကြေးမုံ၊ မြန်မာ့အလင်းတို.ကိုိ စာမျက်နှာ၂၊၃၊ဆိုရင် တစ်လုံးမှမကျန်အောင် ဖတ်တယ်)၊ဒေါက်တာတင်ထွန်းဦးရဲ. သုတစွယ်စုံ မဂ္ဂဇင်းကိုကြိုက်တယ်။ ရေဒီယိုကနေ မောင်ဆုရှင်ရဲ. ဆောင်းပါးလာရင် ရေဒီယိုနားကို ခေါင်းကပ်တဲ.အထိ အနားမှားကပ်ပြီးနားထောင်တယ်။ အခုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် ဖေဖေက ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံရေးသတင်းပေါင်းစုံကို သိနေတာဟာ ဘွဲ.လွန်အတွက် ကျမ်းပြုသလောက်ကို လေ့လာလို.ပဲ လို.ထင်ပါတယ်။ နားထောင်တယ်၊ မှတ်စုစာအုပ်တွေမှာ ရေးမှတ်တယ်၊ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်မကိုအားတဲ.အချိန်တွေမှာ ပြောပြတယ်။ဒါပေမယ့် ဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီ (အဲဒီတုန်းကတော့ မ.ဆ.လပေါ.) အလုပ်မှမလုပ်ဘူး။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ လူချစ်လူခင်များပြီး ကူညီတတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘာအသင်းအဖွဲ.မှ မ၀င်ဘူး။ သူက အရင်ကတပ်မတော်သားပါ။ စစ်သားဆိုတာ… ယောက်ျားဆိုတာ…. ဆိုပြီး ကျွန်မရဲ.မောင်နှစ်ယောက်ကို ဆုံးမတတ်ပါတယ်။ သူ.ရဲ.တပ်မတော်ကို သိပ်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ကျွန်မ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ကျွန်မကိုသိပ်ရင် စစ်သီချင်းတွေအမျိုးစုံဆိုသိပ်ပါတယ်။ ကျွန်မအဒေါ် ဒေါ်လေးမူက “အမလေး၊ ကိုကိုနီရယ် ခလေးသိပ်တာ၊စစ်သီချင်းနဲ.သိပ်ရတယ်လို.”လို.သဲသဲလှုပ်ပြောရင်၊ ဖေဖေက “သမီးက စစ်သီချင်းကြိုက်တယ်”လို.ပြန်ပြောတယ်ဆိုတာ ကြီးလာတော့ သိရပါတယ်။ ကျွန်မလည်းခုချိန်အထိ စစ်သီချင်းတော်တော်များများကို ရနေပါသေး တယ်။ ကျွန်မကို မင်္ဂလာဒုံစစ်ဆေးရုံမှာ မွေးခဲ.ရတာကို လည်းအမြဲဂုဏ်ယူပြီးပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖေဖေက ၁၉၈၈နောက်ပိုင်း မှာတော့ စစ်တပ်က အကြောင်းကို အရင်ကလောက် မပြောတော့ပါဘူး။
အခုတော့ ဖေဖေ့မှာ နားထောင်စရာ ဘီဘီစီ၊ ဗွီအိုအေ၊ အာရ်အက်ဖ်အေ၊ဒီဗွီဘီတွေအပြင် ရုပ်သံကနေတောင်ကြည့်လို.ရနေပြီ၊ မှတ်စု ကတော့ သိပ်မရေးနိုင်တော့ ဘူးပေါ.။ လောလောဆယ် လက်ကလည်း ချော်လဲလို.ကျိုးသွားသေးတယ် တဲ.လေ။ ကျွန်မရေးတဲ. ပို.စ်တွေကိုတော့ ရန်ကုန်မှာ သူငယ်ချင်း KAye က တစ်မျက်နှာမကျန် ပရင့်ထုပ်ပြီး ဖေဖေ့ကို သွားပေးပေးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မကြာခင်ကျရောက်တော့မယ့် တရုတ်နိုင်ငံ တည်ထောင်ခြင်း အနှစ်၆၀ပြည့် အကြောင်းအရာနဲ.ပတ်သက်တဲ. ဆောင်းပါး တစ်ခုကို အင်တာနက်မှာ တွေ.တာ နဲ. ဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ်။
ခုလာမယ့် အောက်တိုဘာလ(၁)ရက်နေ.ဟာ တရုပ်နိုင်ငံရဲ. တရုတ် ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတော် တည်ထောင်ခဲ့တာ နှစ်(၆၀)ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ အဲဒီ နှစ်(၆၀)ကို မော်စီတုန်း (၁၈၉၃-၁၉၇၆) ကအာဏာရှင်ဆန်ဆန်ကြီးစိုးခဲ့တဲ. “ပထမပိုင်းနှစ်(၃၀) ” နဲ. တိန်.ရှောင်ဖိန် (၁၉၀၄-၁၉၉၇)ရဲ. လမ်းညွှန်မှုကို စခဲ့တဲ. ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနဲ. တံခါးဖွင့်ဝါဒ Policy of reform and of opening doors ရဲ.“နောက်ပိုင်းကာလ အနှစ်(၃၀)” ဆိုပြီး အကြမ်းအားဖြင့်ခွဲကြည့်နိုင်ပါတယ်။ စီးပွါးရေးနည်းဗျူဟာအရ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့၊ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒထက် အရင်းရှင်ဝါဒ က သာလွန်ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာကို သက်သေသာဓက အနေနဲ. တရုတ်ပြည်ရဲ. စီးပွါးရေးတိုးတက်မှုဟာ စီမံကိန်းစီးပွါးရေး planned economy နဲ. ကုန်ထုတ်လုပ်မှု means of production ကို ပြည်သူပိုင်အဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ.တဲ. ပထမပိုင်းနှစ်(၃၀) မှာ နလံမထူနိုင်ခဲ့ပဲ။ ဈေးကွက်စီးပွါးရေး market-oriented economy နဲ. ပုဂ္ဂလိကပိုင်စံနစ် private ownership system ကို ကျင့်သုံးခဲ့တဲ. နောက်ပိုင်းကာလ အနှစ်(၃၀) က အရှိန်အဟုန်နဲ. ခုန်ပျံတက်ခဲ့တာကို တွေ.ရပါမယ်။
သို.သော်လည်း စီးပွါးရေးတိုးတက်မှုနဲ.အတူ ရရှိလိုက်ရတာတွေကတော့ ၀င်ငွေ အဆင့်ကွာဟချက်ကြီးမားမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြသနာများရဲ. ဆိုးဝါးပွါးများလာမှု တို.ရဲ. ရှုတ်ထွေးမှုတွေကလည်း ထင်ရှားပေါ်လွင် လာပါတယ်။ ဒါတွေကို ပြုပြင်ဘို.ကတော့ ဒီမိုကရေစီဝါဒကို အခြေခံတဲ. နိုင်ငံရေးအသွင်ကူပြောင်းတာကို မလွဲမသွေရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ. ဖြတ်သန်းခဲ.ပြီးတဲ. နှစ်၃၀က စီးပွါးရေး အသွင်ကူပြောင်းမှုကရလာတဲ. ကောင်းကျိုးတွေကို အုတ်မြစ်သဖွယ်အခြေခံပြီး နောက်ထပ်ရှေ.ဆက်ဖြတ်သန်းမယ့် နှစ်၃၀ကိုတော့ နိုင်ငံရေး အသွင်ကူးပြောင်း ခြင်းနဲ. စွမ်းစွမ်းတမံ ချီတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
စီမံကိန်းစီးပွါးရေး planned economy အောက်မှာနလံမထူနိုင်ခဲ့တဲ. “ပထမပိုင်းနှစ်(၃၀)”
၁၉၄၉ခုနှစ် တရုတ်နိုင်ငံရဲ. ကွန်မြူနစ်အသွင်ပြောင်းကာလမှာ စီမံကိန်းစီးပွါးရေးကို စတင်ကျင့်သုံးခဲ.ပြီး၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်တွေအားလုံး ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပြီး အမြတ်ငွေကိုရည်မျှော်တဲ. ထုပ်လုပ်မှု၊ ကူသန်းမှုတို.လည်း ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရ ပါတယ်။ လက်တွေ.မှာ ပြည်သူပိုင် (နိုင်ငံပိုင်) အဖြစ်နဲ. အသင်းအဖွဲ.ပိုင် (အလုပ်သမားအစည်းအရုံး၊ သမ၀ါယမ) တွေကလွဲရင် ရင်းနှီးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို အသိအမှတ်မပြုပါဘူး။ အဲဒီလို ပြည်သူပိုင် စံနစ်ရဲ. အောက်မှာပဲပြည်သူတွေကဆင်းရဲလာပြီးအဲဒီနိုင်ငံပိုင်စံနစ်ရဲ.အောက်မှာပဲ နိုင်ငံရဲ. သယံဇာတကို ပြည်သူတွေခံစားခွင့်က နည်းပါးခဲ့ရတော့တာပါပဲ။ “ လူထုအားကစားလှုပ်ရှားမှု” တို. “ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုထိမ်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်” တို.လို လှုပ်ရှားမှုတွေဆိုတာလည်း လုပ်လိုက်သေးတယ်။ ဒါပေမယ်. တကယ့် စီးပွါးရေးစီမံကိန်းကလည်း လမ်းတ၀က်မှာ လမ်းပျောက်နေခဲ့တော့တယ်။ ၁၉၅၃ကနေ ၁၉၇၈အတွင်း ပြည်တွင်းထုပ်ကုန်ပမာဏ (GDP,gross domestic product ရဲ.တိုးတက်မှုနှုန်း၆.၁%၊ လူဦးရည်တိုးတက်မှုနှုန်းနဲ.　GDP　တိုးတက်မှုကို အချိုးကကြည့်မယ်ဆိုရင် ၄.၀%မှာ ရပ်တန်.နေခဲ့ပါတယ်။ (နိုင်ငံတော်စာရင်းအင်းဗဟိုအဖွဲ.၊ ပြည်သူ.စီးပွါးရေးအထွေထွေစာရင်း အချက်အလက်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ.ဧ။် “တရုတ်နိုင်ငံသစ်နှစ်၅၀မြောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာရင်း။ ၁၉၉၉ခုနှစ်ထုတ်စာရင်းဇယားမှကိန်းဂဏန်းများ)
ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနဲ. တံခါးဖွင့်ဝါဒရဲ. ဒီဇိုင်နာကြီးဖြစ်တဲ. တိန်.ရှောင်ဖိန်က ဒီ ပထမပိုင်းနှစ်၃၀နဲ.ပတ်သက်ပြီး (“နိုင်ငံရေးဘက်မှာတော့ ဒီမိုကရေစီဘက်ကို ဦးတည်ပြီး၊ စီးပွါးရေးဘက်မှာတော့ ပြည်လည် တည်ထောင်ရေး ကို ကျင့်သုံးမယ်၊ ၁၉၈၅၊ဧပြီလ၊၁၅ရက်နေ. ” )၁၉၉၃ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံစာပေဗိမာန်မှ ထုတ်ဝေသည့် တိန်.ရှောင်ဖိန်မှတ်တမ်း၊ အတွဲ၃၊ အခုလို မိန်.ဆိုကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို.တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့တဲ.နောက်ပိုင်း ၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို မြေယာဖေါ်ထုတ် ရေးနဲ. စုပေါင်းထွန်ယက်စိုက်ပျိုးရေး ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ခဲ့ပါတယ်။ မြို.ပြအနေနဲ. ကတော့ ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစံနစ် ကုန်သွယ်စက်မှု လုပ်ငန်းများ နဲ. ဆိုရှယ်လစ်စံနစ်ရဲ. အသွင်ကူးပြောင်းခြင်းကို တပြိုင်တည်း ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှာ နှစ်မျိုးစလုံး အခြေအနေကောင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုအချိန်မှာပဲ၊ ၁၉၅၇ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အစွန်းရောက်လက်ဝဲ ultraleftism တွေထွက်ပေါ်လာပြီး တစတစဆိုသလိုပဲ အင်အားကြီးထွား လာပါတော့တယ်။ ၁၉၅၈ခုနှစ်မှာတော့ “လှုပ်ရှားမှု နှစ်” တစ်နှစ်အဖြစ်နဲ. ၀ုန်းကနဲကို ထကြွလာခဲ့ပြီး လူထုလူ.ဘောင်အဖွဲ.အစည်း people's commune အသွင်ယူနဲ. လှုပ်ရှားလာပါတော့တယ်။ “ပထမ ကြီးမားကျယ်ဝန်းတဲ. အတိုင်းအတာရှိရမယ်၊ ဒုတိယ လူထုပိုင်ဆိုင်မှုရှိရမယ်” ဆိုတာကို အားပေးတဲ.အခါမှာ ၊ ၀ိုင်းလုပ်ဝိုင်းစား လို.ဆိုပြီး ပေါ်ထွန်းလာတဲ. အကျိုးအမြတ်ကို အားလုံးခွဲဝေစားသောက်မယ် ဆိုရင်းက ထွက်ပေါ်လာတာကတော့ “ အလုပ်လုပ်ကြိုးစားသူမကြိုးစားသူ အချိန်တန် ဒီလခပဲ” ဆို တဲ. အမှားတရားကြီးပါပဲ။ ယဉ်ကျေးမှု ဘက်မှာဆိုလည်း “ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုထိမ်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်”က ပြောလောက်အောင် ဘာမှ မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၇၆ခုနှစ် “လေးယောက်ဂိုဏ်း Gang of Four ” အပြို အကွဲနောက်မှာ ၂နှစ်လောက် ကို အစွန်းရောက်လက်ဝဲတွေရဲ. တယူသန်မှုနဲ. နောက်ကို ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်ရင်း စမ်းတ၀ါးဝါးနဲ.လမ်းပျောက်ခဲ့ ရပါသေးတယ်။ ဒီလိုနဲ.နေလာလိုက်တာ ၁၉၇၈ခုနှစ်အထိ ပါပဲ။ အဲဒီတော့ လယ်သမားနဲ. အလုပ်သမားထုတွေရဲ. ပိုင်ဆိုင်မှုဟာ ၁၉၅၈ကနေ ၁၉၇၈အထိ အနှစ်၂၀အတွင်းဘာမှ မယ်မယ်ရရ မတိုးတက်ပဲ စားဝတ်နေရေးအဆင့်အတန်းဟာ စံအဆင့်ကနေ အောက်မှာ ရောက်သွားပါတော့တယ်။ထုတ်ကုန်မြင့်မားမှုဆိုတာလည်းရေရေရာရာ မရှိတော့ တိုးတက်တယ်လို. မယူဆနိုင်ပါဘူး။ ၁၉၇၈ခုနှစ် နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ. ကုန်ထုတ်လုပ်နိုင်မှု ပမာဏ GNP：Gross National Product ဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅၀တောင် မပြည့်ပါဘူး။ အဲဒီနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာကျင်းပတဲ. ကွန်မြူနစ်ပါတီ ပါတီတွင်းပုံမှန်အစည်းအဝေး မှာ ၊ ကျွန်တော်တို. ခေါင်းအေးအေးနဲ. စဉ်းစားပြီး၊ လက်ရှိအနေအထားကို သေသေချာချာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်မယ် ဆိုရင်၊ ၁၉၇၈ခုနှစ် အထိ တရုတ်နိုင်ငံ တည်ထောင်းပြီး အနှစ်၃၀အတွင်း အောင်မြင်မှု အကျိုးရလဒ်က အင်မတန်ကြီးမားပါတယ်လို. ပြောနိုင်ပေမယ့် စီမံကိန်းချခဲ့တဲ. လုပ်ငန်းတွေကိုတော့ အောင်မြင်စွာအဆုံးမသတ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို.ပဲ အနှစ်ချုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ”
၁၉၇၈ခုနှစ် အထိ တရုတ်နိုင်ငံ တည်ထောင်းပြီး အနှစ်၃၀အတွင်း အောင်မြင်မှု အကျိုးရလဒ်က အင်မတန်ကြီးမားပါတယ်လို. ဆိုတာကို ၊ ဘိန်းစစ်ပွဲ (Opium War ၁၈၅၆ )နောက်ပိုင်း မှာ အချုပ်အချာအာဏာပိုင် ဖြစ်လာတာကို ပါထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ တိန်.ရှောင်ဖိန်ရဲ.“ပထမပိုင်း နှစ်၃၀”ကို လက်ခံနိုင်တဲ. သုံးသပ်ချက်လို.ပဲပြောရတော့မှာပေါ.။
မူရင်းဆောင်းပါးရှင်ကတော့ The Chinese University of Hong Kong မှာပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး The University of Tokyo မှာ စီးပွါးရေးပညာ ဒေါက်တာဘွဲ. ရခဲ့တဲ. တရုပ်လူမျိုး “ခန်း ရှိယူး” ပါ။ ဆောင်းပါးကို အင်တာနက်စာမျက်နှာ
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Tuesday, September 29, 20090ကောင်းမွန်ဝင်းအတွက် ဤပို.စ် နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Saturday, September 26, 20090ကောင်းမွန်ဝင်းအတွက် ဤပို.စ် နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
သမီးတို.မိသားစု သုံးယောက်၊ ဒီနေ. စက်တင်္ဘာ၂၀ရက်နေ.မှာ ကေဘယ်ကားနဲ. တောင်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ တောင်ရဲ.နံမည်က တကာ့အို　Mt. TAKAO ၊လို.ခေါ်ပါတယ်။
တောင်တက်တယ်ဆိုပေမယ့် ကေဘယ် CABLE CAR ကားစီးပြီး တောင်ပေါ်က ရှုခင်းကောင်းတဲ.နေရာအထိ လမ်းလျှောက်၊ ယူသွားတဲ. ထမင်းဘူးဖွင့်စား၊ ဓါတ်ပုံရိုက်၊ လေကောင်းလေသန်.ရှု ပြီး သဘာဝအလှခံစားပြီးပြန်လာကြတာပါ။ တကယ်တောင်တက်သလို တက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။
တကာ့အိုတောင်က တိုကျိုကနေ ရထားနဲ. မိနစ်၅၀လောက်ပဲသွားရပါတယ်။ တိုကျိုနဲ. အနီးဆုံး တောတောင်သဘာဝရှုခင်းအလှကို ခံစားနိုင်တဲ. နေရာလို.ပြောရမှာပေါ.။ တိုကျိုမြို.ရဲ. အချက်အချာ ရှင်းဂျုကု ကနေ ပြီး ရထားတဆင့်ထဲနဲ.လည်းသွားလို.ရပါတယ်။
တောင်ပေါ်ကိုကေဘယ်ကားနဲ.လည်း လမ်းတ၀က်နီးပါးအထိတက်ကြည့်လို.ရတာရယ်.၊ သမီးတို.လည်း ကေဘယ်ကား မစီးဘူးတာရယ်နဲ. အဲဒီကို.သွားခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီ တကာ့အို တောင်ကေဘယ်ရထားလမ်း ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ. ကေဘယ်ကားပြေးလမ်းတွေထဲမှာ အမြင့်ဆုံးနဲ. အမတ်ဆုံးလို. ပြောပါတယ်။
ရထာားစထွက်ပြီးတောင်ပေါ် တက်တဲ. အချိန်ရုတ်တရက်ဆိုသလို မတ်သွားတာရယ်.၊ တောင်အောက်ဆင်းတဲ. အချိန် အောက်ကိုငိုက်ကသွားတဲ. အခါ စီးတဲ.သူတွေအားလုံး လန်.ပြီးအော်ကြပါတယ်။ သမီးတို.သွားတဲ့. အချိန်က ပိတ်ရက်ဖြစ်လို. ကေဘယ်ကားစီးဘို.တင် မိနစ်၃၀လောက်စောင့်ရပါတယ်။
လူအပြည့်နဲ. ကေဘယ်ကားခ တရွေ.ရွေ.နဲ.သွားနေတုံး ပြေးလမ်းတဘက်တချက်က တောတောင်ချောက်ကမ္ဘားတွေကိုကြည့်ပြီး စက်တစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်လို.ကြံဖန်တွေးပြီး ကျောထဲကစိမ့်သွားအောင်ကြောက်မိပါတယ်။ စိးရတဲ့ အချိန်က ၆မိနစ်ထဲပါ၊ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ. ရှင်းပြတာကို နားထောင်လိုက်၊ ဘေးရှုခင်းတွေကို ကြည့်လိုက်နဲ. ခဏကလေးနဲ. ရောက်သွားပါတယ်။
အပေါ်ရောက်တော့ မြို.ဘက်ကိုပြန်မြင်ရတဲ.ရှုခင်းနဲ. တောင်တောင် သဘာဝအလှ၊ သန်.ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ. လေအေးတွေက တကယ်ကို စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းစေပါတယ်။ တောင်ပေါ်မှာ လည်း နောက်ထပ်လည်ပတ်စရာတွေရှိပါသေးတယ်။ ယာ့ကုအိုအု ဘုရားကျောင်း၊ မျောက်ရွာ၊ ဘီယာမောင့် လို.ခေါ်တဲ. ဘီယာဂါးဒင်း၊ ဖူဂျီတောင်ကို လှမ်းကြည့်လို.ရတဲ. ရှုခင်းသာနေရာ။ ဆိုပြီး အမျိုးမျိုးပေါ့။
တောင်တက်လမ်းဆိုပေမယ့် အဓိကလမ်းမကြီးကို ကွန်ကရစ်ခင်းထားတော့လူတွေ အုပ်နဲ. ဆင်းလိုက်တက်လိုက်လုပ်နေပေမယ့် ဖုန်သိပ်မထဘူး။
လမ်းတစ်လျှေက်မှာ အစောင့်နတ်ရုတ်ကလေးတွေ၊ နတ်ကွန်း၊ သစ်ပင်တွေကို စာတမ်းထိုးထားသလို ဘယ်နေရာမှာမဆို သက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကို ပြည့် ပြည့်စုံစုံလမ်းညွှန်ရေးသားထားတာကိုတွေ.ရပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာစာတမ်းလေးတစ်ခုလည်းတွေ.ခဲ.ရပါတယ်။ ဘာရေးထားတာလဲဆိုတော့၊ “အမှတ်တယများနဲ. အတူ သင့်ရဲ. အမှိုက်များကိုလည်း တစ်ပါတည်း အိမ်ကိုပြန်ယူသွားပါ” တဲ.။
နောက်ပြီး အဲဒီမြို.လေးက အလှအပဘယ်လောက်ကြိုက်လည်းဆိုတာကိုလည်းတွေ.ခဲ့ရတယ်။ လမ်းက ရေမြောင်းအဖုံးကို သံဇကာကို “မို.မိဂျိ”လို.ခေါ်တဲ. အရွက်ပုံလေးနဲ.လုပ်ထားတယ်။ ရေမြောင်းအဖုံးအထိ တောင် ဂရုတစ်စိုက်အလှဆင်ကြရှာတယ်နော်။
သမီးတို.လည်း ပိတ်ရက်ရှည်မှာ နေ.တိုင်းထမင်းဘူးထုတ်ပြီး တစ်နေရာပြီးတစ်နေရာ လျှောက်လည်နေကြတယ်လေ။
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Tuesday, September 22, 20090ကောင်းမွန်ဝင်းအတွက် ဤပို.စ် နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
နေကောင်းရဲ.လား၊ သမီးတို.မိသားစုသုံးယောက်လည်း နေကောင်းပါတယ်။ အခု သမီးတို.ဆီမှာ အခု အလုပ်ပိတ်ရက်ပေါ.။ ဒီနှစ် စက်တင်ဘာလ မှာ ၁၉ရက်နေ.ကနေ၂၃ရက်နေ.အထိ (၅)ရက်ဆက်တိုက် ပိတ်တယ်။ တစ်ရက်စီသီးသန်.ပိတ်ရက်တွေက တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆက်တိုက်ကျသွားပြီး(၅)ရက်ဖြစ်သွား တာ။ ဂျပန်မှာဒီလို လေးငါးရက်ဆက်တိုက် ပိတ်တာမျိုးက ပုံမှန်နှစ်စဉ်မေလမှာရှိတဲ. ဂိုးလ်ဒင်းဝိခ် Golden Week လို.ခေါ်တဲ. နားရက်ရှည်ပေါ.။ ဒီနှစ်မှာ
တော့ အခုလို စက်တင်ဘာလ မှာ ပိတ်ရက်ရှည်ထပ်ရတဲ့အတွက် ဒီပိတ်ရက်ရှည်ကို ဆေးလ်ဗားဝိခ် Sliver Week လို. နံမည်ပေးကြတယ်။ ပိတ်ရက်ရှည်ဆိုရင် ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးတွေထွက်ကြပေမယ့် ဒီနှစ်ကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ နံမည်ကြီးတုတ်ကွေးကြောင့် ညအိပ်ခရီးကိုရှောင်ကြတဲ.လူတွေလည်းရှိတယ်။ သမီးတို.လည်း သားလေးကငယ် တော့ ခရီးရက်ရှည်ကိုရှောင်လိုက်တယ်။ ဒီနေ.တော့ သားလေးကို တိရိစ္ဆာန်ရုံကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ် အလည်ခေါ်သွားတယ်။ သမီးတို.ရဲ. သူငယ်ချင်း တွေလည်းပါတယ်။ တိုကျိူ က အုအဲနို အရပ်မှာရှိတဲ. အုအဲနို တိရစ္ဆာန်ရုံကို သွားခဲ့ကြတယ်လေ။ အိမ်ကနေ မိနစ်၃၀လောက် သွားရတယ်။ မြေအောက်ရထားနှစ်ဆင့်စီးရတယ်။ ရထားကတော်တော်ချောင်တယ်။ ရထားဘူတာမှာ အရင်ဆုံးရထားမစီးခင် ဘယ်တွဲမှာစီးရင် ပြောင်းစီးရမယ့် လိုင်းကို အဆင်ပြေပြေသွားနိုင်မလဲဆိုတာကို ဘူတာမှာရှိတဲ. လမ်းညွှန်ဇယားမှာကြည့်ပြီးမှစီးတယ်။ကိုယ်လက်အင်္ဂါချို.ယွင်းမှုကြောင့် လွတ်လွတ်လပ်လပ် မသွားနိုင်သူတွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ အလျှင်လိုသူတွေက ဒီလိုလမ်းညွှန်ကို ကြည့်ပြီးလိုရာကို ချောမွေ.လွယ်ကူစွာသွားနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားတာပေါ.။
ရထားတွဲရဲ. လမ်းညွှန်ဇယားဘေးမှာ နားမလည်ရင်၊ အကူအညီလိုရင်ဘူတာစာရေးကိုခေါ်မေးလို.ရတဲ. အင်တာကောလ်ဖုန်းလည်းတပ်ဆင်ထားတယ်။ ဖုန်းက ပျက်မနေဘူး၊ဘယ်တော့ခေါ်ခေါ်ရတယ်လေ။
ဘယ်ဘက်ကပုံကတော့ ဘူတာရဲ.ပလက်ဖေါင်းပေါ.။ ထိုင်ခုံရဲ.ဘေးမှာ သောက်ရေ၊ရေနွေးကြမ်း၊ကော်ဖီနဲ. အခြားသောက်စရာအမျိုး စုံစုံလင်လင်ကို အပူ၊အအေး နှစ်မျိုးစလုံးကို ရောင်းတဲ.စက်ရှိတယ်။ မီးမပျက်တော့ အချိန်မရွေး အပူ၊အအေးကြိုက်တာရွေးပြီး ၂၄နာရီဝယ်ယူသုံးဆောင်နိုင်တယ်။
ရထားအစုန်လမ်းနဲ. အဆန်လမ်းကို ပလက်ဖေါင်းနှစ်ဘက်ကြားမှာ တွေ.ရတဲ့ပုံလေ။သမီးတို.ဘူတာကတောဘက်ကျတော့ ဘူတာက ခပ်ရှင်းရှင်းပဲ။ ပလက်ဖေါင်းရဲ. အစပ်က မျှားလေးတွေက တွဲပေါ်တက်ရမယ့် အပေါက်ရထားက အဲဒီအပေါက်နဲ. တဲ.တဲ.မှာ အမြဲရပ်တယ်။ အ၀ါရောင်အဖုအဖုလိုင်းကြီးကတော့ မျက်စိမမြင်တဲ.သူတွေ သူတို.ရဲ. တောင်ဝှေးနဲ.ထောက်ပြီးသိနိုင် အောင်လုပ်ပေးထားတာလေ။
အဲဒီလိုအဖုအဖုကလေးတွေနဲ.လမ်းအ၀ါကို ဘတ်စကားမှတ်တိုင်မှာကော လမ်းအတော်များများနဲ. အဆောက်အဦတွေမှာပါလုပ်ထားပေးတယ်။
ဘူတာထဲကိုကြည့်ပါအုန်း။ သန်.ရှင်းနေပြီး အမှိုက်တစ်စမရှိဘူးလေ။ ဂျပန်မှာ ညစ်ပတ်ပြီး၊ အမှိုက်ကို စည်းမဲ.ကမ်းမဲ.ပစ်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အများအားဖြင့်ကတော့ အလွန်ကိုသန်.ရှင်းပါတယ်။ လူတွေက စည်းမဲ.ကမ်းမဲ. အမှိုက်မပစ်သလို၊ သန်.ရှင်းရေးကိုလည်း အထူးဆောင်ရွက်တာတွေ.ရပါတယ်။ အဲလို သန်.ရှင်းရေးလုပ်တဲ.လုပ်ငန်းကို ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေများတယ်။ အသက်ကြီးတဲ.သူတွေများတယ်။ .ပင်စင်ယူထားတဲ.သူတွေက ပြန်ဝင်လုပ်တာများတယ်။ နောက် အဲဒါက အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေများတယ်။ ဒီမှာက အသက်ကြီးလည်း အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေကို ဆက်လုပ်တာတော်တော်တွေ.ရတယ်။သန်.ရှင်းရေးလုပ်တဲ.သူတွေက တစ်ချိန်လုံး အလုပ်လုပ်တယ်။ မြောင်းကြားတဲ.အထိ လိုက်ကလော်ပြီး တံမြက်စည်းလှည်းတယ်။ မှန်က အစ၊ နံရံအဆုံးဖုန်သုတ်တယ်။ နေ.တိုင်းလုပ်တော့ ဘယ်ကိုကြည့်ကြည့် ဖိတ်ဖိတ်လက်နေတော့ တာပေါ.နော်။
ဘူတာကနေ တိရစ္ဆာန်ရုံကို လမ်းလျှောက်သွားတာ၅မ်ိနစ်တောင်မကြာပါဘူး။ ၀င်ခက လူကြီးတစ်ယောက်ကို ယန်း၆၀၀ပေးရတယ်။
ညာဘက်က ပုံက တိရစ္ဆာန်ရုံ အ၀င်ဝမှာရိုက်ခဲ.တဲ.ပုံပေါ.။ နောက်ပြီး သူ.နေ.အလိုက် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်း အလိုက်လုပ်တဲ. ပွဲတွေလည်း ရှိတယ်။
ခလေးတွေစိတ်ဝင်စားအောင်လို. ပြထားတာတွေလည်းတွေ.ရတယ်။ ဖျော်ရည်သောက်တဲ.ဗူးခွံတွေကို ကြိုးနဲ.သီပြီး လှည်းမှာချိပ်တာတို.။ ဘယ်သူမဆို ကစားနိုင်တဲ. ဆပ်ပြာဘူဘောင်းကို လေနဲ.မှုတ်တဲ. စက်ကလေးကိုထားပေးထားတာတို.ကိုလည်းတွေ.ရတယ်လေ။ အ၀တ်တွေနဲ.ဘာကြီးမှန်းမသိတဲ. လုံးလုံးကြီးကို မော်တာနဲ.လေမှုတ်ပေးထားပြီး ခလေးတွေက အလုံးကြီးကို တွန်းလိုက်၊ ကိုယ်နဲ.တိုက်လိုက် နဲ. စိတ်ဝင်စားပြီး၊ ပျော်စရာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတာတွေလည်းရှိတယ်။
၀င်ဝင်ချင်းမှာ ဆင်တွေကိုထားထားတယ်။ တိရစ္ဆာန်ရုံတွေမှာ လာကြည့်တဲ.သူတွေက အစာမကျွေးရဘူး။
မျောက်ရွာကို တော့ ကျောက်ဆောင်တွေနဲ.သစ်ပင်၊ရေအိုင်တွေနဲ.
ဒီလိုငှက်တွေကို ရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ရုံ မှာတွေ.ဘူးခဲ.သလိုပဲ။ တခြားအကောင်အထူးအဆန်း တွေလည်းတွေ.ခဲ.ရပါတယ်။ ညဘက်မှာကျက်စား တဲ. အကောင်တွေအတွက်ကို အမှောင်အခန်း သီးသန်.လုပ်ပေးထားတယ်။
တိရစ္ဆာန်ရုံထဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ ရုပ်ထုတွေ၊ နားနေတဲ. နေရာ၊ အိမ်သာ၊ လက်ဆေးဘို.နေရာ၊ လက်ဆေး ဆတ်ပြာရည် ကအစထားပေးထားပါတယ်။
တိရစ္ဆာန်ရုံထဲမှာ ကြာကန်အကြီးကြီးကလည်း သိပ်လှပါတယ်။
ရန်ကုန်ကတိရစ္ဆာန်ရုံလည်း သတိရ လာတယ်။ အခုလောက်ဆို အများကြီးတိုးတက်နေပြီပေါ.နော်။
တိုးတက်ပြီး ခလေးတွေအတွက် ဗဟုသုတနဲ. အမှတ်တရတွေ ဖြစ်စေမယ့် တိရစ္ဆာန်ရုံတစ်ခု ဖြစ်ပါစေလို. ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ သမီးကတော့ငယ်ငယ်က အခေါက်များစွား သွားခဲ့တဲ. တိရစ္ဆာန်ရုံကို တော့ အမြဲသတိရအောင်းမေ.လျှက်ပါပဲ။နောက်ပြီးတော့လူကြီးဖြစ်တဲ.အထိ တိရစ္ဆာန်ရုံ အမြဲသွားချင်ပြီး တိရစ္ဆာန်ရုံမသွားခင်နေ.မှာ အစာမျိုးစုံကို ဈေးကနေ၀ယ်ပြီး ပြင်ဆင်ယူသွားတတ်တဲ့. ဒေါ်လေးဇဇ်ကိုလည်း သတိရတယ်။
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Monday, September 21, 20090ကောင်းမွန်ဝင်းအတွက် ဤပို.စ် နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း